Fizarana lehibe an'ny China API 602 Valve vy vita amin'ny vy
Newsway Valve Company dia mpanamboatra valves matihanina amin'ny API 602 Forged Steel Globe Valves, afaka mamokatra setranga 40000 API 602 Valve vita amin'ny vy vita amin'ny vy isam-bolana isika. Newsway Valve dia manana lisitra valves be dia be hanamorana ny mpanjifa amin'ny fandefasana amin'ny fotoana rehetra. Anaran'ny vokatra: Steel Glob ...
Fomba fanodinana sy famaritana ny fahombiazan'ny valizy
1. Famaritana karazana fonosana grafita Misy karazana masira telo manaraka ireto izay matetika ampiasaina amin'ny valve. Ny fonosana ampiasaina amin'ity tetikasa ity dia ny karazana fanokafana tokana amin'ny sary 1 ary ny fonosana miendrika peratra amin'ny sary 3. Ireo sary tena izy dia toy izao: Sary 1 karazana fonosana tokana fanokafana Fi ...
Fitehirizana sy fanoloana ny valizy valiny API 600 Gate Valve
Fomba fitehirizana fonosana valva: Ireo mpanefy ity tetikasa ity dia matetika misy ireto fitaovana roa manaraka ireto: PTFE sy grafite malefaka. Rehefa tehirizina dia asio tombo-kase anaty kitapo na boaty. Mitahiry tsara ao amin'ny trano fanatobiana entana maina sy misy rivotra, aza miala amin'ny tara-masoandro. Tandremo ny rivotra mandritra ny fitahirizana maharitra, sy ny contr ...
Ao amin'ny rafitra fampitana tsiranoka, ny valizy dia singa fanaraha-maso tsy azo ovaina, izay matetika manana ny asan'ny lalàna, ny fanodinana, ny fanoherana ny lamosina, ny fanapahana ary ny fanovana. Ny valizy dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria sy sivily. Ny valizy avo lenta dia karazana mahazatra ampiasaina amin'ny valves. Ny mampiavaka azy ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-12
Ny valizy baolina elektrika dia misy ny fihetsika mihodina 90 degre. Ny vatan'ny akoho dia sehatra misy boribory amin'ny lavaka na fantsona mandalo ny axis. Ny valizy baolina dia matetika ampiasaina ao amin'ny fantsom-panafody ho valizy baolina elektrika hanapaka, hizara ary hanova ny fitarihan'ny mpanelanelana. It ...
Newsway Valve orinasa valizy hafanana marobe dia rafitra famehezana vy, ny endrika famehezana dia vy amin'ny tombo-kase vy, peratra tombo-kase vy amin'ny tombo-kase metaly azo atakalo, takelaka vy tsy misy fangarony ary peratra tombo-kase vita amin'ny takelaka vita amin'ny metaly. Ankoatry ny fiara mandeha herinaratra, ny lolo voafehy mafy ...
Ny tsenan-tsolika indostrialy dia efa milamina tsara amin'ny telovolana fahefatra
Tao anatin'ny telovolana telo voalohany tamin'ny taona 2016, nitombo haingana ny toekarem-pirenena, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboan'ny harinkarena faobe 11,5%, izay nanome ny tsenan-tsofina baolina ho fironana tsara. Na izany aza, mitohy hatrany ny fironana amin'ny fihenan'ny toe-karena, ary misy ny olana tsy manam-paharoa izay mety hamadika ny toekarena ho ...
Torolàlana momba ny fividianana valizy Stainless Steel 316 Ball Valve
Ny valin'ny baoritra vy Newsway Valve Company 316 dia manana rafitra vatan-damba roa sy telo. Ny flange eo afovoany dia ampifandraisin'ny bolt ary ny tombo-kase dia vita amin'ny firaka mifototra amin'ny nickel. Tsy misy PTFE bearings amin'ny vatan'ny valizy ambony sy ambany, mampihena ny fikorontanana sy ny opera fitsitsiana asa ...
Fironana tsenan'ny valizy Flange Gate
Ity tatitra antsoina hoe "Global Flange Gate Valve Market" ity dia iray amin'ireo fanampiana lehibe indrindra sy lehibe indrindra amin'ny arisivin'ny fikarohana NSW Research. Manome fikarohana sy famakafakana amin'ny antsipiriany momba ny lafiny lehibe amin'ny tsenan'ny valizy vavahady manerantany. Ny mpandinika tsena iza ...
API 602 VALOBE VALVE
API 602 GLOBE VALVE Newsway Valve Company API 602 valves globe dia manana endrika bonnet telo. Ny voalohany dia bonnet karazana bolt, izay ampifandraisina amin'ny sehatra mihabe sy mihodinkodina, mampiasa fehikibo vy tsy misy fangarony ary gasket spiral spirite malemy paika. Ny fifandraisana amin'ny peratra dia azo ampiasaina araka ny takiana. Ny ...
Valve vy tsy miendrika vy
Valve Stainless Gate Valve Ny ampahany manokatra sy manidy ny vavahady vy tsy matevina dia ny vavahady, ary ny làlan'ny fivezivezena amin'ny vavahady dia mifandraika amin'ny làlan'ny tsiranoka. Ny vavahady vy tsy misy fangarony dia misy faritra famehezana roa. Ireo sehatra famehezana roa amin'ilay maodely be mpampiasa indrindra ...
Famaritana sy famakafakana ny valizy baolina mitsingevana tanana
Ny valizy baoritra, ny valizy lolo ary ny valizy plug dia karazana valizy mitovy. Ny maha samy hafa azy dia ny ampahany manidy ny valva-baoritra dia baolina iray, izay mihodina manodidina ny tsipika afovoan'ny vatan'ny valva mba hahatratrarana ny fanokafana sy ny fanidiana. Ny valizy baolina dia matetika ampiasaina hanapahana, hizarana ary hanovana ...
Lisitra lehibe an'ny China API 602 Forged S ...
Fomba fandefasana sy famaritana fampisehoana ...